Fihetseham-po momba ny tantaram-pahaterahana ao Rigobert ny tantaram-pianakaviana
Home TORO FARANY AFRICAN Fihetseham-po momba ny tantaram-pahaterahana ao Rigobert ny tantaram-pianakaviana
Nohavaozina farany teo Jona 29, 2020
Ny LB dia manolotra tantara iray momba ny Lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anaram-bositra; "Lehibe lehibe". Ny tantara nosoratan'i Rigobert Song Childhood tantara sy ny zava-bita tsy navoakan'ny tantara dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny tantara dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, fianakaviana, akaikin'ny fahafatesana sy ireo tranga tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fanjakany eo amin'ny sehatra fiarovan'ny ekipam-pirenen'i Cameroun. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra ny momba ny Bio Bio Rigobert Song izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Voalohandohan'ny fiainana
Rigobert Song Bahanag dia teraka tamin'ny andro 1st of July 1976 tao Nkenglicock, tanàna iray any amin'ny faritra Atsimon'i Kamerona izay misy ny tsy fahampiana rehefa misy baolina kitra eo amin'ny tongotra iray.
Teraka tamin'ny reniny izy, Bernadette Song ary dadatoany, Paul Song. Ny rain'i Song, Paul Song, dia maty fony izy mbola kely. Noho izany, tsy nahalala velively ny rainy mihitsy izy kanefa nanokana ny fahombiazany rehetra taminy. Tsy isalasalana fa ny tsy fisian'ny rainy teo amin'ny fiainany dia hery mahery vaika ho azy.
Nandritra ny taona maha-zatovo azy dia noheverina ho toy ny hira i Song alfa tanora, olona iray nandray anjara mavitrika teo amin'ny sehatry ny baolina kitra rehetra tany amin'ny tanindrazany. Tamin'izany fotoana izany izy dia nanana fanapahan-kevitra goavana izy raha nilalao ho an'ny klioba teo an-toerana sy ny mpilalao lavitra mihoatra ny taonany.
Fotoana tena nahatongavana ho an'ny Rigobert Song, ny andro nahatanterahan'ny nofinofiny. Ny fanesorana ny scout frantsay iray ho an'ny antso an-tariby Frantsay (Metz) no fotoana nahafantaran'i Rigobert fa ho lasa mpanankarena izy amin'ny farany. Tamin'ity fotoana antsoingoana ity, ny fanirian'ny Songs nilalao ho an'ny ekipam-pireneny dia toa tsy ho lasa fantany akory.
Ny hira teo amin'ny teny Frantsay dia nanomboka ny asany matihanina tao Metz. Nanao fisehoan-javatra mahery vaika izy izay nahazoany fifantenana Ireo Liona tsy mety ho an'ny World Cup ao 1994 izay nahitana azy mpilalao sarimihetsika erantany (ilay mpilalao baolina kitra tanora indrindra nahazo karatra mena tamin'ny tantaran'ny fiadiana ny amboara eran-tany).
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Relationship Life
Raha tsy misy fisalasalana, Rigobert dia sary famantarana raha ny momba ny football afrikana. Ny fahaizany milalao sy ny hery anaty, indrindra ny fomba fiainany eo an-tampony, dia manangana sary feno azy. Ny marina dia; Rigobert dia lehilahy iray manontolo. Ny fitiavana ny ainy, Gabrielle Esther Nnomo Mballa dia niaraka tamin'ny hira teo amin'ny lalao androany.
Samy manan-janaka efatra (roa lahy sy vavy roa) i Song sy i Esther. Ny anaran'ny zanany dia; Ronny, Bryan, Yohanna Bernadette ary Hillary Veronique Liliane. Ny Rigobert Song dia nanome toky fa ny fianakaviany (vady aman-janaka) dia mijanona any Liverpool raha nifindra tany amin'ny firenen-kafa izy mba hilalao baolina kitra.
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Ny aretina sy ny fahafatesana
Nitranga tamin'ny andro fahadimy tamin'ny 3rd Octobre 2016 raha niady mafy nandritra ny andro maromaro ny mpitsabo Kamerone sy Frantsay mba hamonjena ny fiainan'ny Rigobert Song izay niharan'ny fanafihana miharo fepetra nateraky ny famelezana.
Mpilalao Kamerone teo aloha Rigobert Song dia nisy lozam-pifamoivoizana tao an-tranony tao Yaounde izay nahita azy nandalo tao amin'ny koma iray. Araka ny tatitra, raha tsy ho an'ny alikany dia ho faty izy. Na dia izany aza dia nitatitra betsaka tao amin'ny media sosialy sy vohikalam-baovao maro fa efa maty izy.
Rigobert, rehefa nomena tafatafa nandritra ny fialan-tsasatra, dia nanome kaonty momba izay tena nitranga. Amin'ny teniny ...
"Navelako teo am-baravarana ny varavarana satria niandry mpitsidika iray aho, raha niala teo aho dia ho faty. Tsy fantatro izay nitranga tamiko. Tena tsy nanan-tsiny aho. Tsy fantatro akory aza fa niady teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana aho. Rehefa nilatsahako i II ka nahatsiaro tsy afa-nanoatra, dia hitako fa nanomboka niankohoka mafy ny alikako izay nampitandrina ny tompon-trano izay niantso ny fiara mpamonjy voina.
Tena fahagagana tokoa !! Rehefa nifoha tamin'ny koma aho, dia navoakako fotsiny 60 kilos, tsy mampino raha lehilahy lehibe tahaka ahy, "
Ity ambany ity ny Rigobert Song ora isa-maraina taorian'ny nifohazany tamin'ny komity roa androany.
Raha mbola tao amin'ny koma izy dia nilaza ny mpilalao Liverpool teo aloha fa naharesy lahatra izy fa nahita ny rainy maty. Amin'ny teniny ...
"Nanomboka ny haizina ary tany anaty koma aho dia nahita ny raiko izay maty Izaho dia kely loatra ka tsy mahatsiaro. Rehefa nahita ahy izy, dia hoy izy: Rigobert !!, inona no ataonao ao ?? Avia !!! Hoy izy tamiko. Tena toe-javatra sarotra tokoa izany.
Faly aho ankehitriny fa miaina amin'izao fotoana izao, ary tsy misy intsony amin'ny lasa. Ny zava-dehibe dia hoe salama tsara aho, ok, "
Izany no teny nolazain'i Rigobert tamin'ny BBC World Football. Nino i Rigobert fa mpankafy azy, fianakaviana / havana izy ary ny filoham-pirenena, Paul Biya izay nandoa $ 78,000 noho ny faktiorany ara-pahasalamany izay namonjy azy. Feno fankasitrahana ihany koa izy noho ireo teny feno hatsaram-panahy tao Liverpool tamin'ny alàlan'ny twitter araka ny hita etsy ambany.
Hoy izy ...
"Ny mpankafy indrindra indrindra ny fianakaviako dia efa nametraka an'Andriamanitra tao anatin'ny olana. Fantatr'izy rehetra fa ratsy ny toe-javatra nisy ahy ary nanomboka nivavaka aho. Ny tsirairay tamin'ireo mpianakaviko dia nivavaka ary nanontany 'Andriamanitra ô, aza atao izany, aza maka an'i Rigobert'. Misaotra anareo rehetra aho noho ny fampodiana ahy. "
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Fianakaviana
Ny fiheverana ny hamoy ny rainy, Paul Song amin'ny vanim-potoana maimaim-poana ary na dia tsy manana sary azy aza dia miteraka fanaintainana ho an'ny Rigobert Song. Raha niroborobo ny reniny, i Bernadette Song dia nahazo ny fanampian'ny havany. Anisan'izany ny rahalahiny iray izay rain'ny mpilalao baolina kitra Arsenal teo aloha ary mpilalao baolina kitra mpiaro an'i Kamerona, Alexandre Dimitri Song Billong, AKA Alex Song.
Alex. Fankasitrahana mandrakizay ny dadany Rigobert Song izay toy ny ray faharoa ary manan-danja lehibe eo aminy raha misafidy baolina kitra ho asa. Ity ambany ity i Alex sy ny fianakaviany.
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Sarintany mena
Ankoatra ny Zinedine Zidane, Ny Rigobert Song dia hany mpilalao nalefa tao amin'ny World Cup roa samihafa, ny iray manohitra an'i Brezila amin'ny 1994 ary ny iray hafa manohitra an'i Chile ao amin'ny 1998. Noraisiny ihany koa ilay rakitsoratra ho ilay mpilalao tanora indrindra izay tokony halefa amin'ny World Cup, 17 taona.
Amin'ny lafiny hafa, ny Rigobert Song dia lazaina fa hany mpilalao amin'ny lalao fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny 1994 sy 2010 FIFA. Nasongadiny tao amin'ny lalao 1994, 1998, 2002 ary 2010 FIFA World Cup.
Farany, ny zava-misy manafintohina iray dia nanambara ny 24 taona sy ny 42 andro ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny Roger Milla (42 taona sy 35 andro) sary etsy ambony ary 17 taona Rigobert Song (17 taona sy 358 andro) nandritra ny kaontinanta mondialy 1994. Io elanelam-potoana io dia mitoetra ho lehibe indrindra amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny World Cup.
Tsara ny manamarika fa mpiloka tsy manan-tsahala Roger Milla dia nitarika ny Liona tsy manantsiny tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ny taona 1900.
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Aza mampitaha ahy amin'i Rio Ferdinand
Raha nanasonia ny West Ham United ho an'ny £ 2.5 tapitrisa tamin'ny taona 2000 ny Rigobert Song dia nanasonia azy ho mety ho solon'izany Rio Ferdinand, izay nafindra tany Leeds United. Izany no nahatezitra ny mpiaro an'i Kamerona.
Ny lahatenin'i Rigobert Song dia nofaritana tamin'ny BBC as "Tsy sambatra". Tamin'ny androny androany, nanitrikitrika i Song fa tsy te hampitahaina amin'i Ferdinand izy, satria nino izy fa fanavakavahana ny talentany.
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Fiainana manokana
Rigobert dia tena lalina sy feno fihetseham-po. Tena mampihetsi-po, mahatsapa ary mikarakara lalina momba ny fiainan'ny fianakaviana sy ny tranony izy. Rigobert dia miombom-pihetseham-po ary mifandray amin'ny olona izay mihaona aminy. Izy dia olona iray izay hiombom-pihetseham-po amin'ny fanaintainan'ny hafa sy ny fijaliana. Miorina eo amin'io sehatra etsy ambony io isika izao, manome antsika fintina ny toetran'ny toetrany.
hery: Izy dia tena miavaka, mahatalanjona, be fihetseham-po, mahatsikaiky ary maharesy lahatra.
fahalemena: Mety ho mamaim-panahy, pessimistika, mampiahiahy ary manipulation izy.
Inona no tian'i Rigobert Song: Art, fialam-boly (karazana any an-tokantrano), miala aina na ao anaty rano, manampy ny fianakaviany / havana ary manana sakafo tsara amin'ny namana.
Inona no tsy tian'i Rigobert: Ireo vahiny, izay tsikera ny reniny be fitiavana, mampiseho ny zava-misy manokana momba ny vadiny sy ny sipany (sns).
Rigobert Song ny tantaram-pitiavam-bahaony Plus untold biography facts -Fitantanam-pitondrana
Tamin'ny faran'ny 2015, ny tati-baovaon'i Chad dia nanakaiky fa lasa mpitantana ny ekipam-pirenen'i Chad saingy tsy nisy fifanarahana natao noho ny antony tsy fantatra. Tamin'ny volana febroary 2016 dia notendrena ho mpitantana ny Kamerone "A" ekipam-pirenena. The "A" Ny ekipa dia ekipa nasionaly ahitana mpilalao monina ao Kamerona. Toy ny tamin'ny Aprily 2018, Rigobert dia iray amin'ireo mpangataka 77 ho an'ny asan'ny ekipa nasionaly Kamerona mipetraka.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Rigobert Song Childhood sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Kamerona Football Diary
Andramahan'i West Ham Football Diary
Hakim Ziyech tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Samuel Eto'o ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography
Ny tantaram-pahaterahan'i Mohamed Elneny momba ny tantaram-pahaterahana mamaivay bebe kokoa no hitanao
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaram-pitiavana kristiana Benteke momba ny tantaram-pitiavam-bazana bebe kokoa
Riyad Mahrez tantaran'ny tantaram-pahaterahana ny tantaran'ny ankizy nandritra ny taona maro
Pierre-Emerick Aubameyang tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Michael Essien Fitiavana ny Tantara momba ny Zaza Taorian'ny Fotoam-pahagagana
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana